တစ်ဦးကား Surat Thani ငှားရမ်း | တစ်ဦးကားကလပ်ငှားရမ်း
Surat Thani ကားတစ်စီးငှားရမ်း Surat Thani
မော်တော်ကားငှားရမ်း Surat Thani
တစ်ဦးကားကိုငှား Surat Thani
သင်က Surat Thani ခုနှစ်တွင်တစ်ဦးကားကိုငှားအကြောင်းသိထားဖို့လိုကဘာလဲ။
သွားရောက်လည်ပတ် acountry နှင့် Tour အကောင်းဆုံးဘီးနောက်ကွယ်မှပြုသောအမှုဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်သင်က thousandsof မိုင်အိမ်ကနေနေအခါ, what're သင်ပြုလို့ယူဆတယ်? ခရီးသည်တစ်ဦး goodoption ဖြစ်ပါသည်, သို့သော် အကယ်. သင်ဤသည်အလွန်အကြောင်းပြချက် want.For နေရာတိုင်းမှာမှကိုယ့်ကိုကိုယ်မောင်းအဖြစ်အတိအကျအဖြစ်မကောင်းမင့်, သင်သွားနှင့်အလည်အပတ်ခရီး ofyour ကြာချိန်အဘို့ကားထွက်ငှားချင်ပါလိမ့်မယ်။
ထိုင်း, forexample, သွားရောက်လည်ပတ်ရန်အကြီးအနေရာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ဒါဟာ pristinebeaches တစ်အပူပိုင်းတိုင်းပြည်အိမ်မှာရဲ့မြင်ကွင်းများအမျိုးမျိုးကိုတွေ့မြင်ရန်။ ဒါဟာအစ Muay ထိုင်း၏မွေးရပ်မြေနှင့်စည်းကမ်းအတွက်လေ့ကျင့်ဖို့အကောင်းဆုံးနေရာပါပဲ။
သငျသညျမကြာမီထိုင်းအချိန်မရွေး onexploring အစီအစဉ်ရှိပါကသင်ကားတစ်စီး surat Thani ငှားသင့်တယ်အတိအကျအဘယ်ကြောင့်ဖြစ်သော, yourcar ၏စညျးစိမျခမျြးထဲမှာလုပ်ချင်ပါလိမ့်မယ်။
doingthat မီ, သို့သော်, သငျသညျသေချာသင်ကိုယ်တိုင်ပထမဦးဆုံး aboutlocal ဥပဒေများနှင့်အခြားအရေးကြီးသတင်းအချက်အလက်ပညာပေးကြောင်းလုပ်ပါလိမ့်မယ်။
အောက်တွင်သင်ထိုင်းနိုင်ငံအတွက်ကားတစ်စီးငှားရမ်း surat Thani န်ဆောင်မှု availingof go ရှေ့တော်၌ကိုယ်ကျိန်းသေသိလိုမယ်လို့ threekey သတင်းအချက်အလက်ဖြစ်ကြသည်။
1. Regardingyour ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်။ နှင့်သူ၏လိုင်စင်အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြစ်ပါတယ် lessthan ရက်ပေါင်း 90 အဘို့အနိုင်ငံတော်၌ဖြစ်ခဲ့ဘူးပါတယ်သူကိုခရီးသွားဧည့်သည်တစ်ဦးကိုကားငှားဖို့တစ် foreignlicense သုံးစွဲဖို့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ လိုင်စင်အင်္ဂလိပ်လိုသည်မဟုတ်, တရားဝင်သည်ဆိုပါကသင်ထိုင်းသို့မဟုတ် English translationinto တစ် certified ရရှိထားပြီး secure နိုင်နေထောက်ပံ့ပေးသုံးစွဲဖို့ဖြစ်နိုင်သမျှ isstill ။
·အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာယာဉ်မောင်းရဲ့လိုင်စင်ကိုလည်းနေသမျှကာလပတ်လုံးတစ်ဦးအဖြစ်တစ်နှစ်ထိုင်းနိုင်ငံအတွက်ကားငှား usedto ဖြစ်နိုင်သည်။ သို့သျောလညျးနောကျ, အန္တရာယ်ကင်းစေခြင်းငှါ, ကား legally.Although ကားမောင်းဆက်လက်ထိုင်းအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလိုင်စင် secure မှ you'llneed, ပထမဦးဆုံးသင့်ရဲ့အာမခံပေါ်လစီသည်စစ်ဆေးကြပါ။ အခြားသူများကိုသာ Thailicense လက်ခံမည်ဟုစဉ်တချို့ကမူဝါဒများ, သာအထိသုံးလ၏ကန့်သတ် haveshorter ။
2. Gettinga ထိုင်းယာဉ်မောင်းရဲ့လိုင်စင်။ ထိုင်းယာဉ်မောင်းရဲ့လိုင်စင်မဆိုပြည်နယ်၏သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၏ localDepartment မှာရရှိနိုင်ပါသည်။
· (က vehiclesafely operating ထံမှသင်တို့တားဆီးလိမ့်မည်ဟုမဟုတ် havingphysical သို့မဟုတ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမသန်မစွမ်း (s)) အသံသည်စိတ်နှင့်ကျန်းမာရေးကောင်းရှိကြလော့။
·အနည်းဆုံးအသက် 18 နှစ်ရှိပါ။
·ခိုင်လုံသောက Non-ပြောင်းရွှေ့လာသောလူဗီဇာပါ။ ခရီးသွားဧည့်လျှောက်ထား maynot ။
3. Regardinginsurance ။ စကားရိုက် ifyou acar အငှားဝန်ဆောင်မှုကိုရှာဖွေနေသည့်အခါစျေးပေါတဲ့ကားငှား surat Thani ပိုပြီးဒါအများကြီးအဖြစ်ဝေးအာမခံသွားသည်အဖြစ်ရဖို့မမျှော်လင့်ပါနဲ့။ ဒါဟာထိုင်းဥပဒဟာအလွန် bareminimum တာဝန်ယူမှုကိုလိုအပ်ချက်ရှိပါတယ်မှတ်ချက်ယူအရေးကြီးပါတယ်။ အခြားသူတွေလူတန်းစားအာမခံ usefirst စဉ်တချို့ကကုမ္ပဏီများ, နိမ့်ဆုံးကိုအသုံးပြုပါ။
* မှားလိုင်စင်လုပ်နိုင်တဲ့ထားရှိခြင်းနှင့်အာမခံလွှမ်းခြုံ voidany ပါလိမ့်မယ်။ သငျသညျကိုလက်ခံလိုင်စင် thetype အဘို့နှင့်ကတရားဝင်သည်အဘယ်မျှကာလပတ်လုံးအဘို့မူဝါဒမမေ့မလြော့ပါကြောင်းသေချာအောင်လုပ်ပါ။
** အမြဲတမ်းအာမခံလွှမ်းခြုံ inwriting အဘို့အမေးပါ။ မေးခွန်းများမေးရန်နှင့်သူတို့ကိုသင်အလျင်စလိုမသွားပါစေပါဘူးမကြောက်ပါနှင့်။ အဆိုပါ carrental surat Thani န်ဆောင်မှုကိုသင်မူဝါဒ inwriting ပေးနိုင်ခြင်းမရှိသေးလျှင်သူတို့ကိုယုံကြည်ကိုးစားရှောင်ရှားခြင်းနှင့်အခြားရှာဖွေပါ။ ဒါကြောင့်စိတ်မကောင်းပါဘူးထက် besafe မှပိုကောင်းမယ့်သတိရပါ။
ကားတစ်စီး inThailand ငှားရမ်းဤလှပသောတိုင်းပြည်ပျော်မွေ့ဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ surat ထွက်စျေးပေါကောင်းတစ်ဦးငှားရမ်းဝန်ဆောင်မှုကိုရှာဖွေကားတစ်စီးကလပ်ငှား thanicheck ။ သို့မဟုတ်သင်တို့သည်လည်းသင့်ရဲ့ခရီးသွားအေဂျင်စီထံမှအကူအညီတောင်းခံနိုင်ပါတယ်။ ကိုယ့်ခရီးစဉ်လုံခြုံပြီးလုပ်ရတဲ့-အခမဲ့ကြောင်းသေချာစေရန်ပထမဦးဆုံး yourdue လုံ့လဝီရိယလုပ်ဖို့မမေ့မလြော့ပါ။